Kirish booy la naasnuujinayo | allsanaag
Kirish booy la naasnuujinayo
Ma rabtaa inaad ogaato sababta Isimada Warsangeli ay ugu soo dhowayn waayeen degaanadooda madaxda Dawladda federaalka Soomaaliya?
Isim kasta oo ka mid ah Odayaal dhaqamweedka beelaha Somaaliyeed oo aan ka hayn Isimada ka soo jeeda beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli, waxay madaxda Soomaaiyeed ku casumaan ama ku soo dhoweeyaan degaanadooda ay xarumaha soo jireenka ah ku leeyihiin. Tusaale Boqor Burhaan wuxuu ku soo dhoweeyey Madaxweyne Farmaajo Xaruntii saldhiga u ahayd Boqortooyadiisa
Hadaba yaa u diiday in Isimada beelaha Warsangeli xarumahooda ku soo dhoweeyaan Madaxda Soomaalida.
Marabigan hoos ka hadlaya wuxuu ka soo jeeday sideetameeyadii Qoys aad u dan yar oo ka mid ahaa reer guuraaga degmada Ceel buh, sida dhaqanka saldanada Warsangeli ahaa iyo in lays gacan qabto, ayaa Oday ka mid ahaa Odayaashii ugu caansanaa uguna lacagta badnaa gobolka Sanaag, Allah ha u naxariistee oo markii danbe Isaaqu dileen wuxuu keenay degmada Ceerigaabo si uu wax u baro. Waa ka cararay dugsigii iyo waxbarashaddii . Markii uu dugsigii ka cararay ayaa waxa la saaray gaari si uu Kirishbooy uga noqdo oo qoyskiisa wax u taro.
Isaga oo Kirishboygii ah ayaa beesha isaaq ku soo hubeeyeen dadkiisa iyo degaankiisa si aan mashaariic looga hirgelin.
inta Dadka noocan ah lagu naas nuujinayo gobolka Sanaag sida uu yahay wax iska bedeli maayaan . Waa ninkii xabadda ku furay Caruur ku mudaharaadaysa Sanaadiiqda SNM oo Cisbitaalka dhigay , Waa ninka qiranaya in Wasiir Jamaal uu xabadeeyey. Ma kula tahay in ninkan Mashaariic iyo nololol u keenayo shacabka gobolka sanaag
← Geesigii Puntland oo hadlay Madaxwaynaha DF Soomaaliya oo Kormeeray Xarumo Ganacsi. →